LED ဗီဒီယိုဖန်သားပြင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည် - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
အထင်ကြီးစရာအကောင်းဆုံးအချက်က LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်များ၏တောက်ပသောရောင်ခြည်, စတုဂံကနေအထိ, arc-shaped, ပင် trapezoidal ပန်ကာ -shaped. ဤကြီးမားသော LED ဖန်သားပြင်များသည်ထုတ်လုပ်သူအမျိုးမျိုးမှလာသည်, နှင့်စျေးနှုန်းများကိုအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်. သို့သော်, LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်၏စျေးနှုန်းကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်အဓိကအားဖြင့်အောက်ပါအချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်. ဤတွင်လူတိုင်းအတွက်အတိုချုပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်.
1. LED မီးခွက်ပုတီး. LED မီးပုတီး၏အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြသည် LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်. အစက်အစေး၏ခြားနားချက်အရသိရသည်, အီလက်ထရွန်နစ်ဖန်သားပြင်၏စတုရန်းမီတာတိုင်းတွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောသို့မဟုတ်ထောင်ပေါင်းများစွာသောမီးချောင်းများပါဝင်သည်. LED မီးများတွင်အဓိကအားဖြင့် In-line နှင့်မျက်နှာပြင်မီးခွက်များရှိသည်. In-line အမျိုးအစားကိုအဓိကအားဖြင့်ပြင်ပ LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်များတွင်မြင့်မားသောတောက်ပမှုရှိသည်, နှင့်မျက်နှာပြင် - တပ်ဆင်အမျိုးအစားကိုအဓိကအားဖြင့်မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆနှင့်အတူမိုးလုံလေလုံ LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်အတွက်အသုံးပြုသည်. ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ်များ၏ LED မီးခွက်ပုတီး၏စျေးနှုန်းကိုလည်းအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်. ကျွန်တော် LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်ကိုဝယ်တဲ့အခါ, ကျနော်တို့မီးပုတီး၏အမှတ်တံဆိပ်ရှင်းလင်းရပေမည်. ဥပမာ, ထိုကဲ့သို့သောအမေရိကန် Cree အဖြစ်အဆင့်မြင့်အမှတ်တံဆိပ်, ဂျပန်ရဲ့ Nichia, တရုတ်နိုင်ငံ၏ Lehman, စသည်တို့, ယုံကြည်စိတ်ချရသောဤအမှတ်တံဆိပ်၏အရည်အသွေး, ကောင်းသောတည်ငြိမ်မှု, မြင့်မားသောတောက်ပမှု, နှင့်သင်တန်း၏စျေးကြီး. Optoelectronics နှင့် Epistar တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အသုံးများဆုံးအီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်များဖြစ်သည်. ဤကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးသုံးစွဲသူများအတွက်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်.
2. သံမဏိကိုယ်ထည်. ထိုကဲ့သို့သောတပ်ဆင်ခတည်နေရာအဖြစ်အချက်များကြောင့်ထိခိုက်, ထည့်သွင်းခြင်းနည်းလမ်း, မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား, frame ကိုဖွဲ့စည်းပုံရွေးချယ်ရေးနှင့်အခြားအချက်များ, LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်စီမံကိန်းများ၏စျေးနှုန်းသည်အလွန်ကွာခြားမည်. အထူးသဖြင့် LED အပြင်ဘက်ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များလုပ်သည့်အခါ, ဆောက်လုပ်ရေးပတ် ၀ န်းကျင်၏သက်ရောက်မှုကြောင့်စီမံကိန်းစျေးနှုန်းမှာအလွန်ကွာခြားသည်. . သံမဏိဘောင်၏စျေးနှုန်းမှာသံမဏိပစ္စည်းများဖြစ်သည်, သံမဏိပစ္စည်းကိုပြန်လည်, ဂဟေအလုပ်သမား, နှင့်အရန်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်. သံမဏိပစ္စည်းများနှင့်ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းများအတွက်ဈေးနှုန်းများသည်အလေးချိန်အပေါ်အခြေခံသည်. ကော်လံ installed လျှင်, ကော်လံ၏သံမဏိနှင့်မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာများ၏စျေးနှုန်းလည်းပါဝင်သည်.
3. ထောင့်ကွက်ဖွဲ့စည်းပုံ. အဆိုပါ box ကိုဖွဲ့စည်းပုံသာမန်ရိုးရှင်းတဲ့ box ကိုသို့ခွဲခြားထားတယ်, ရေစိုခံသေတ္တာနှင့်အထူး -shaped ဖွဲ့စည်းပုံသေတ္တာ. ရိုးရှင်းသောဗီဒိုများသည်ဈေးအပေါဆုံးဖြစ်ပြီးရေစိုခံဒီဇိုင်းမလိုအပ်ပါ, အထူး -shaped အဆောက်အ ဦ များနှင့်အတူဗီဒိုစျေးအကြီးဆုံးနေစဉ်. ဥပမာ, box ကို arc သို့လုပ်လျှင်, စက်ဝိုင်း, တြိဂံသို့မဟုတ်အခြားမမှန်ပုံသဏ္.ာန်, ဒါကြောင့်သီးခြားစီဒီဇိုင်းရမည်ဖြစ်သည်, နှင့်မှိုသီးခြားစီဖွင့်လှစ်သည်, အရာအလွန်စျေးကြီးသည်, နှင့်သေတ္တာ၏ဒီဇိုင်နာများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များကိုလိုအပ်သည်, စျေးနှုန်းသည်သာမန်ထက်သာလွန်သည်။ ကက်ဘိနက်သည်အလွန်စျေးကြီးသည်.
4. အခြားအထောက်အကူပြုပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ကာလ. ထိုကဲ့သို့သော power supply အဖြစ်အခြားပစ္စည်းများ, ထိန်းချုပ်မှုစနစ်, အသံ, အပူလွန်ကျူးပစ္စည်းကိရိယာများ, ဝါယာကြိုးနှင့်အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်အောင်များအတွက်အမျိုးမျိုးသောဆက်စပ်ပစ္စည်း. After-sales service သည်သုံးစွဲသူများစွာသည်အလွယ်တကူလျစ်လျူရှုသောပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်. လက်ရှိအချိန်မှာ, ထုတ်လုပ်သူအများစုသည်တစ်နှစ် (သို့) နှစ်နှစ်ကြာအောင်ရောင်းပြီးချိန်ကိုပေးသည်. ဒါပေါ့, သင့်ရဲ့ LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်မြင့်မားလိုအပ်သည်ဆိုပါက, ထုတ်လုပ်သူသုံးခုကိုခွင့်ပြုတာအကောင်းဆုံး, ငါးနှစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်မကရှည်လျားသောအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုအချိန်, သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ပိုလုံခြုံစေရန်, အသုံးပြုရန်အတွက် ပို၍ စိတ်ချရသည်.
အထက်ပါအချက်များနှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ဟာ LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ရဲ့ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်. အဲဒီမှာထုတ်လုပ်သူတွေအများကြီးရှိပေမယ့်စျေးနှုန်းစစ်ပွဲကအရမ်းပြင်းထန်သည်, ထိုစကားကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည် “စျေးပေါတာမကောင်းဘူး”. ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြီးစားထုတ်လုပ်သူများကိုရွေးချယ်ရမည်, ကောင်းသောဂုဏ်သတင်း, နှင့်ခိုင်မာတဲ့ R ကို&ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအဖြစ်: D စွမ်းရည်. သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်ကုန်ကိုဝယ်နိုင်သည့်အခါမှသာ, သငျသညျအဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်နိုင်ပါတယ်.